China Double intsimbi indlebe waphosa-yentsimbi skillets okuphumelela German red ichaphaza ibhaso Ukwenziwa kunye mveliso | ISANXIA
Iintsimbi eziphindwe kabini zensimbi yentsimbi ephumelele ibhaso elibomvu laseJamani
Ingcaciso:80280 * 55mm
Uhlobo lwembiza:Ungakhetha ezantsi tyaba okanye ezantsi ngeenxa zonke, kunye okanye ngaphandle umlomo, ukuphatha indlela, njl
Ezi skillets zenziwe ngentsimbi zinokwenza zonke iintlobo zokutya, ezinje nge salmon eqhotsiweyo, i-shrimp eyosiweyo, ii-noodles ezisityiweyo, i-crispy pancake, i-tofu ethosiweyo njalo njalo. It has akukho ukutyabeka imichiza, kodwa sinikele ingqalelo kulondolozo xa usebenzisa. Inokuba nefuthe elihle kakhulu lokungabinantonga. Isempilweni kwaye yomelele ngakumbi kunembiza engenantonga. Ingasetyenziselwa ixesha elide ngokusetyenziswa ngononophelo. Iyathandwa kakhulu ngoomama.
Impilo ngaphandle kokutyabeka ngemichiza yenye yeenzuzo zayo. Ikwanobubanzi obukhulu be-28cm, enokwenza ukutya okuninzi ngexesha kwaye idibane nokusetyenziswa kwabantu aba-4-6. Umazantsi wayo ujiye, yiyo loo nto wenza udonga olungqingqwa kunye nodonga olucekeceke. Isinyithi esidityanisiweyo esinomlinganiso wegolide wokuqhutywa kobushushu. Xa kushushu, ukufudunyezwa kobushushu kunokukhawuleza kwaye kufane ngakumbi.
Owona mbane ugqibelele wobushushu kunye nobushushu bokugcina bunokwenza ukutya kube mnandi kwaye kube nesondlo. Kwangelo xesha, nokuba kungumlilo omkhulu okanye ngumlilo omncinci, unokubuyisa ubushushu ngokufanelekileyo, ukuze ukutya kungabi lula ukunamathisela imbiza, nabaqalayo banokuwulawula kakuhle umlilo, ukupheka akusangxami.
Umzimba wembiza wamkela inkqubo entsha yonyango lobushushu be-nitriding (ukutshiza iTekhnoloji engenasiphelo). Emva kokucima kunye nokupholisa ubushushu obuphezulu, ubunzima bomphezulu webhotile buyaphuculwa, umgangatho webhodwe uphuculwe kakhulu, kwaye amandla erusi ayandiswa.
Iinkcukacha zoyilo kunye nokwenza ngokwezifiso
Zimbini iintlobo zesiciko onokukhetha kuzo, enye enye ukhetho, enye inkululeko. Uhlobo lokuqala lwesivalo sisiciko seglasi esixineneyo, esinganyangekiyo kubushushu nesomeleleyo. Ungayibona inkqubela phambili yokupheka kokutya kwisiciko. Isiciko sesibini senziwe ngeCunninghamia lanceolata, esilula kwaye esityebileyo ngembonakalo, inokuthintela isikali, inefuthe elifanelekileyo lokufudumeza ubushushu, kwaye iqinile kubume, akukho lula ukuba kuqhekezwe kwaye akukho lula ukonakala.
Emazantsi embiza agudileyo kwaye anokusetyenziswa kwizitovu ezahlukeneyo. Iindlebe zentsimbi ezimbini zenzelwe ukuba zibe nkulu kakhulu. Kulunge kakhulu ukuba uyisebenzise kunye neiglavu ze-scald ezichaseneyo, kwaye kukhuselekile ukubamba.
Egqithileyo I-oven eseDatshi esempilweni inamandla okupheka
Okulandelayo: Isiciko sepani sokucoca isinyithi sinokusetyenziswa njengepani yokufryisha
xtreme Iron Skillet, uNamel Skillet, I-Iron Iron Skillet, i-Cast yentsimbi enqabileyo, ebizwa ngokuba yiCast Iron Skillets, Isinyithi se Iron Iron,